Ungayifumana njani iMac elahlekileyo okanye ebiweyo ngeFumana iMac yeManqaku
Ngu-Edward C. Baig
Ngokuqinisekileyo ukhathalela kakhulu malunga neMac yakho. Kodwa njengaye wonke umntu, uxakekile kwaye uphazamisekile amaxesha ngamaxesha, kwaye nangona kungenakwenzeka, kunokwenzeka ukuba ushiye incwadana ebalekayo yeMac ngasemva kwetaxi. (C'mon, ngokungathi uza kuba nedesktop esebenzayo ekhitshini, ungasayishiyi apho.) Okubi nangakumbi kukuba iMac yakho inokubiwa.
Inqaku lokuFumana iMac yam (okwahlukileyo kokuFumanisa i-iPhone yam kwi-Apple exabisekileyo ye-Apple) kwandisa amathuba okuba uphinde ubuye umatshini olahlekileyo. Qinisekisa ukuba inqaku likhethiwe kwii-iCloud Preferences.
I-bupropion hcl xl idosi
Emva koko, ukuba umatshini wakho ukhe waya kwi-AWOL, ngena ungene kwi-iCloud kuyo nayiphi na isikhangeli sewebhu okanye Fumana usetyenziso lwam lwe-iPhone kwi-iPhone okanye kwi-iPad. Emva koko ucofe i-iPhone yam. Ewe, yinto ebizwa njalo, nangona ukwimishini yokukhangela kwi-Mac yakho.
Kwibhrawuza yewebhu, ubona imephu emva kokujonga ikhampasi ekuvumela ukuba uyazi ukuba le nkqubo isebenza ukuzama ukufumana umatshini wakho onxaxhileyo. Ngamanye amachaphaza aluhlaza kwimephu abonisa indawo yezixhobo zakho-ubuncinci, indawo ekufutshane neApple inokuyikhomba.
Ngaba i-antibiotics ichaphazela ixesha
Cofa kwiqhosha leeDivisi kwiziko eliphezulu lesikrini ukuze ubone uluhlu lwazo zonke izixhobo ozibeke ukuba usebenze ngokufumana i-iPhone yam (okanye iMac njalo njalo). Ngethamsanqa, ikhompyuter oyikhangelayo ayizukusebenza ngaphandle kweintanethi. Ukuba Fumana i-iPhone yam ifumana iMac yakho, cofa iMac kuluhlu, olubiza le festile.
Ngoku kuthweni? Umlumkisa njani umSamariya olungileyo onomatshini wakho ukuba uyawufuna? Inketho yakho yokuqala kukukhalisa ialam kwi-Mac yakho engekhoyo ngokunqakraza Dlala Isandi. Kodwa eli nqaku liluncedo kuphela ukuba iMac elahlekileyo isendlwini yakho. Ialam ayinamsebenzi ukuba umntu oyivayo akazi ukuba angakufumana njani ukuba ubuyisele ifowuni yakho.
Endaweni yoko, cofa u-Lock kule festile ukutshixa umatshini ukuze umntu one-Mac yakho angakwazi ukujonga nakweyiphi na into eyimfihlo okanye ebuthathaka. Usebenzisa iphedi yamaqhosha ebonakalayo, faka ipasikhowudi enamanani amathandathu (onokuyikhumbula ngokulula) ukuvula ikhompyuter ukuba uyibuyile kwaye xa uyibuyisa. (Kuya kufuneka uqinisekise ikhowudi yokudlula ngokungena kuyo okwesibini.)
Emva kokuba wenze njalo, unikwa indawo yokuchwetheza umyalezo onganyanzelekanga ovela kwiscreen se-Mac-umyalezo onethemba lokuba uya kucenga umntu onekhompyuter yakho ukuba awubuyise. Ukunikezela umvuzo awukho ngaphandle kombuzo (ngaphandle kokuba ujongene nesela). Cofa iqhosha lokuTshixa xa ugqibile ukuchwetheza umyalezo. Ufumana i-imeyile yokuqinisekisa.
uthini umahluko phakathi kwe-cialis kunye ne-viagra
Ukuba ufika kwisigqibo sokuba umatshini ubiwe ngenene okanye umntu onayo ngoku akananjongo yokuwubuyisela, cofa u-Erase Mac kwi-iPhone yam ukuze ucime imixholo kunye noseto. Ngenxa yokuba eli nyathelo lihle kakhulu, iApple ifuna ukuba ufake i-ID yakho ye-Apple ngaphambi kokuba uqhubeke. Ukucima iMac kungathatha ukuya kuthi ga kumhla ogqityiweyo.
Unezizathu ezininzi ezinyanzelekileyo zokuxhoma kwilifu. Ithuba lokufumana iMac elahlekileyo ilungile apho phezulu kunye neyona ilungileyo kubo.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-triamterene-hctz
iud iintlungu ezisezantsi
Unyango lokuqunjelwa opioid
Iimpawu ze-epinephrine auto injector
I-chlorhexidine gluconate umlomo uhlambe
rp 10 ipilisi emhlophe